Wariye Swedish ah oo lagu dhaawacay Masar | Somaliska
Wariye ka tirsan telefeshinka Sweden (SVT) ayaa lagu dhaawacay qalalaasaha ka socda dalka Masar, wariyahaan oo soo tabinayay xaalada dalkaas ayaa mar qura la waayay asagoo markii dambe la sheegay in uu hospitalka yaalo ka dib markii midi lagu dhaawacay. Wariyahaan oo lagu magacaabo Bert Sundström ayaa dhaawac weyn loo geystay, SVT ayaa sheegtay in aan la garaneyn sababta keentay in la weeraro wariyahaan. SVT ayaa sheegay markii ay waayeen wariyaha in ay telefoon u direen ka dibna uu ka qabtay qof carabi ka hadlaaya kaasoo ku yiri "Wariyihiina anaga ayaa hayna, ciidanka Masar ayaa haya, dowlada Masar ayuu gacanta ugu jiraa soo doonta haddii aad dooneysaan isagoo nool" Wariyaasha ka shaqeynaya Masar ayaa waxaa la soo daristay xaalad cakiran isbuucaan ayadoo wariyaal ka tirsan telefishinka Al Jazeera shalay xabsiga la dhigay. Wariyaal kale ayaa iyaguna la garaacay oo dadka Mubarak taageersan ayaa ka careysan tabinta xaalada Masar ayadoo dowladuna ay si toos ah u raadsaneyso wariyaasha. Wasiirka arimaha dibeda ee Sweden Carl Bildt ayaa sheegay in uu ka walwalsanyahay xaalada wariyaasha Masar asagoo ugu baaqay dowlada Masar in ay joojiso cadaadiska ay ku hayso wariyaasha.
Wariye Swedish ah oo lagu dhaawacay Masar
Wariye ka tirsan telefeshinka Sweden (SVT) ayaa lagu dhaawacay qalalaasaha ka socda dalka Masar, wariyahaan oo soo tabinayay xaalada dalkaas ayaa mar qura la waayay asagoo markii dambe la sheegay in uu hospitalka yaalo ka dib markii midi lagu dhaawacay.
Wariyahaan oo lagu magacaabo Bert Sundström ayaa dhaawac weyn loo geystay, SVT ayaa sheegtay in aan la garaneyn sababta keentay in la weeraro wariyahaan.
SVT ayaa sheegay markii ay waayeen wariyaha in ay telefoon u direen ka dibna uu ka qabtay qof carabi ka hadlaaya kaasoo ku yiri “Wariyihiina anaga ayaa hayna, ciidanka Masar ayaa haya, dowlada Masar ayuu gacanta ugu jiraa soo doonta haddii aad dooneysaan isagoo nool”
Wariyaasha ka shaqeynaya Masar ayaa waxaa la soo daristay xaalad cakiran isbuucaan ayadoo wariyaal ka tirsan telefishinka Al Jazeera shalay xabsiga la dhigay. Wariyaal kale ayaa iyaguna la garaacay oo dadka Mubarak taageersan ayaa ka careysan tabinta xaalada Masar ayadoo dowladuna ay si toos ah u raadsaneyso wariyaasha.
Wasiirka arimaha dibeda ee Sweden Carl Bildt ayaa sheegay in uu ka walwalsanyahay xaalada wariyaasha Masar asagoo ugu baaqay dowlada Masar in ay joojiso cadaadiska ay ku hayso wariyaasha.
Laanta Socdaalka oo soomaalida ku qabsatay magaca!
Raysal wasaaraha Sweden oo fadeexad galay
Dad badan oo Sweden laga musaafurinayo
Wariye meel xun aw ku dhimahaa duff ku baxx
mel dadki daganaay ay kasoo guureen aw kajaraaa mugan yaraay aan maqli jiray nagatag qandha war jecele wariye maad tahay mase bulac aa kusoo gardaadshay
February 4, 2011 at 14:33
Intii aw Raadinaayay , wax aw Islaamka ku caayo , ayaa tiisa la marsiiyay !!
Wariyaasha , dhulalka Islaamka , ama Afrika waxay ka soo sawiraan meelaha , Qashin Qubka , shacabkooda , ku nool dhulkaan Barafka miiran ah ayayna ka dhaadhicyaan , Afrika iyo Asia tahay meel lagu hoogay .
Wariyahaan , waxaa aw ka tegay Tuulada aan hadda deganahay ee ka mid ah Sweden – Dalarna.